नेपाली क्रिकेटरलाई अमेरिकी कप्तानले जिस्काएपछि… – Dainik Sangalo
काठमाडौंबाट जाँदै गरेको टाटासुमो दुर्घटनाग्रस्त ! २ जनाको मृत्यु, ८ जना घाईते
१८ वर्षीय युवक शौ’चालयमा बसिरहेका बेला स’र्पले गो’प्य अं’गको टुप्पो नै खाइदिएपछि…
रिण काडेर लिएको पैसा एम्बुलेन्स भाडा दिदा सकियो, आर्थिक अभाबले अस्पतालको सैयामा छटपटाईरहेका बालक
अविरल बर्षा र बाढीका कारण १८ जनाको मृ,.x त्यृ, दर्जनौ बे,xप,xत्ता
काजल जोशी र छत्र शाहीको पहिलो दशैं , यति धेरै परिवारबिच रमाइलो गर्दै मनाए (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
नेपाली क्रिकेटरलाई अमेरिकी कप्तानले जिस्काएपछि…
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र ३१, २०७८ समय: १३:५७:३३
आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत ओमान सम्मिलित त्रिकोणाात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकामाथि जित दर्ता गरेको छ । सोमबार ओमानमा भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई पाँच विकेटले हराएको थियो ।
ओमानको राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमीको अल एमिरात क्रिकेट ग्राउन्डमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले निर्धारित ५० ओभर खेल्दा नौ विकेटको क्षतिमा दुई सय ३० रन बनाएको थियो । नेपाल दुई सय ३१ रनको लक्ष्यसहित ब्याटिङमा थियो ।
कुशल भुर्तेलले रोहित पौडेलसँग तेस्रो विकेटका लागि ५१ रनको साझेदारी गरेका थिए । भुर्तेल पेभेलियन फर्किदा ब्याटिङ गर्न आएका कुशल मल्ल एक रन जोड्दै आउट भए । नेपालविरुद्ध ३३औँ ओभरमा बलिङ गरेका अमेरिकाका कप्तान सौरभ नेत्रवालकरले मल्ल आउट भएपछि उनलाई गिज्याएका थिए । कुशल मल्लको विकेट लिएपछि नेत्रवालकरले मल्ललाई लक्षित गरी चर्को स्वरमा कराएका थिए । फिल्ड अम्पायर राहुल अशेर र अहमद पख्तिनले नेत्रवालकरको उक्त ब्यवहारमा ध्यानाकर्षण जनाएको थियो ।
त्यसपछि अनुसन्धान थालेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले कुशललाई गिज्याएको ठहर गर्दै कप्तान नेत्रवाल्करमाथि कारबाही गरेको छ । आइसिसीले नेत्रवालकरको उक्त ब्यवहारले मल्ललाई आक्रामक गतिविधि गर्न उक्साउने रूपमा अर्थ्याएको छ ।
नेत्रवालकरले आइसीसी आचारसंहिताको लेभल १ को उल्लङ्घन गर्दा कारबाहीमा परेको आइसिसीले जनाएको छ । आइसिसीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेत्रवालकरले आइसिसीको संहिताको धारा २.५ को उल्लङ्घन गर्नुभएको छ ।’ उक्त धारामा खेलको क्रममा कुनै खेलाडीलाई आउट गर्दा आफ्नो भाषा, व्यवहार र शारीरिक हाउभाउले उक्साउने गतिविधि गर्नु रहेको छ । आइसिसीले नेत्रवालकरको अनुशासनिक रेकर्डमा एक डिमेरिट अङ्क थपिदिएको छ ।
अब नेपाल र अमेरिकाले भोलि (शुक्रबार) अपराह्न ४ः१५ बजे ओमानको राष्ट्रिय क्रिकेट एकेडेमीको अल एमिरात क्रिकेट ग्राउन्डमा पुनः खेल्ने छन् ।
Last Updated on: September 16th, 2021 at 1:57 pm
१५५ पटक हेरिएको
कार्तिक ०१ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
राशिफल १०८ वर्षपछी नाग पञ्चमीमा परेको छ यस्तो अद्भुत योग, यी राशिको चम्किनेछ भाग्य Posted on August 13, 2021 Authoradmin Post Views: 274 काठमाडौँ । यस वर्षको नाग पञ्चमी दुर्लभ योग बनेको छ। राहु–केतु र काल सर्प दोषसंग सम्बन्धित यो महासंयोग १०८ बर्षपछि बनेका छन्। ज्योतिषीहरुका अनुसार यो बर्षको नाग पञ्चमीमा यस पटक योग उत्तरा र हस्त नक्षत्रको महासंयोग बनेको छ। यस पटक कला शर्प दोषबाट मुक्ति पाउनको लागि परिगणित र शिन नामक नक्षत्र लाग्दै […] राशिफल यो साता यी राशिहरुको हुँदैछ भाग्योदय? भदौ २७ देखि असोज २ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् Posted on September 11, 2021 Authoradmin Post Views: 916 मेष राशिः स्वास्थ्यमा सुधारको संकेत देखिन्छ । प्राविधिक क्षेत्र सबल रहनेछ । अध्ययन–अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागी भइएला । कार्यमा सफलता मिल्नेछ । कार्यमा मित्रको सहयोग पाइनेछ । लेखन र कलाको क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ । स्थानान्तरणको योग छ । नयाँ योजना बन्नेछन् । पति–पत्नीबीचकोअवस्था समधुर रहला । साता समग्रमा राम्रो […]
कोभिडबाट एकै दिन एक हजारको मृत्यु, ५० प्रतिशतले लगाएनन् खोप
९.	कास्कीको घान्द्रुकमा जीप दुर्घटना, चालकसहित ८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
गीताको पे’टमा बच्चा राखेर फ’रार भएका भनिएका सागर आङ्दाम्बे १० वर्षपछि फे’ला(भिडियो हेर्नुहोस्)